“Doorashadu Ilaa Hadda Waxa Sharci Ah In La Qabto 28 March 2017ka. Ilaa Hadda Sharci Bedelay Ma Jiro Hadii Uu Jiro Bal Cidda Haysaa Ha Sheegto”.Siyaasi Cali-Gurray | Oodweynenews.com , Oodweyne News, OODWEYNENEWS
“Doorashadu Ilaa Hadda Waxa Sharci Ah In La Qabto 28 March 2017ka. Ilaa Hadda Sharci Bedelay Ma Jiro Hadii Uu Jiro Bal Cidda Haysaa Ha Sheegto”.Siyaasi Cali-Gurray
January 11, 2017 | Published by: goobjoog
Hargaysa:(OWN)-Muj.Cali-gurray,ayaa ka difaacay Musharaxa Xisbigga KULMIYE eeddo dhawaanahan loo soo jeedinayay,taas oo nuxurkeedu ahaa in aannu wax tix-gallin ah siinahayn Dadka abaaraysan oo ka door-bidayo inuu Kursigga Fuulo.Muj.Cali-Gurray,ayaa sheegay in wax ilaa hadda sharcigga ahi yahay inay Doorashaddu dhacdo 28 March,2017-ka,inta uu Musharax Muuse ku doodayaana ay intaas tahay.
“Hadalkani qoonsimaad ma laha sida aan u arko. Ilaa hadda waxa yaal ee sharciga ah hadii uu sheegay ma wax aan sharci ahayn inu yidhaa baa sax ah. Doorashadu ilaa hadda waxa sharci ah in la qabto 28 March 2017ka. Ilaa hadda sharci bedelay ma jiro hadii uu jiro bal cidda haysaa ha sheegto.
Dhibaatada abaarta muu dafirin ee wuxu cadeeyay inay mudan tahay in mudnaata la siiyo oo wax kasta laga horeeysiiyo sidii loogu gurman lahaa dadkeena ay sida ba’an u saamaysay. Muddo kordhinta wuxu cadeeyay in loo daayo haya’daha ku shaqada leh oo ilaa hadda aan wax war ihi ka soo bixin. Komishanka iyo xisbiyadu wuxu cadeeyay in aanu midna awood sharci u lahayn dib u dhigista doorashada waana runtii.
Hadii ay dhacdo muddo kordhin sharciga waafaqsani oo Article 83 loo cuskado cid diidi karaysaa ma jirto oo waa markii ugu horaysay ee duruufaha ku xusan qodobkaasi ay jiraan.
Hadaba waxa iyaguna jirta dhinacyo u haysta in muddo kordhintu ay iyaga dhinacooda dano gaar ihi ugu jirto dhinacyo kalena ay dhibaato gaar ah u yeelanayso laakiin anigu lama qabo.
Si kastaba ha noqoto eh wixii sharci ah waa lagu wada qasban yahay lakiin go’aanku marka caqligu taliyo iyo marka qalbigu taliyo ee laab la kac iyo caadifiyad yahay wuu kala saxsanaan karaa. Inta badan ka caqliga la adeegsado ee la rogrogo ee si qoto dheer looga fakaro ayaa wax-ku-ool noqon kara. Laakiin nasiib darro waynu naqaanaa dadkeena marka ay caadifiyadoodu kacsan tahay dheg uma laha wax kale iyo talo kale oo ka duwan ta ay doonayaan xataa hadii ay ka wanaagsan tahay. Hadana inta badan waa dambe ayay wax arkaa talona waa mar aad garan kari waydo iyo mar aad gaadhi kari waydo.
Anigu dadka Somaliland oo dhami waxan qabaa inay isku dan yihiin. Wixii u hagaagaa wuu u wada hagaagayaa wixii ka xumaadaana wuu ka wada xumaanayaa. Ma jirto cid wanaag ay keligeed leedahay heli kartaa.
Sidaa daraadeed doon keliya ayaynu wada saaranahay hadii ay degto way inala wada degaysaa mana jirto cid iyadu keligeed bedbaadi kartaa. Markaa wax kale ma jiraan eh Ilaahay sida roon isagu ha ina waafajiyo uun isaga mooyee ma jirto cid kale oo awood lihiye”.